နည်းစနစ်မှန်မှန် ရေသောက်ကြမယ် - Hello Sayarwon
Hello Sayarwon » လူနေမှုပုံစံနှင့် ကျန်းမာရေး » နည်းစနစ်မှန်မှန် ရေသောက်ကြမယ်
ရေသောက်တာများ ငယ်ငယ်ကတည်းက သောက်တတ်သားပဲလို့များတွေးနေလား။ လူတိုင်းကရေသောက်တတ်တာသိပေမယ့်နည်းစနစ်မှန်မှန်သောက်တတ်ရဲ့လားဆိုတာကတော့ မသေချာဘူးလေနော်။ ရေကို နည်းစနစ်မှန်မှန်သောက်တတ်မှလည်း ကျန်းမာမှာပါ။ ဒီတော့ ရေကိုနည်းစနစ်မှန်မှန်သောက်တတ်ဖို့ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်။
ရေသောက်ရတဲ့ပမာဏက အသက်အရွယ်၊ ရာသီဥတုအခြေအနေ၊ ကိုယ်အလေးချိန် နဲ့ ဘယ်လိုလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နေလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ကွဲပြားမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်နော်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်နေ့ကို ရေ ၈ ခွက်သောက်ရပါမယ်။ အနည်းဆုံးတော့ ၆ ခွက်ပေါ့။ ဒီသောက်လိုက်တဲ့ရေတွေက အချိန်မှန်ဖို့လည်းလိုပါမယ်နော်။
မနက်နိုးနိုးချင်းမှာ ရေတစ်ခွက်သောက်ပါ။ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေကို အကောင်းဆုံးလည်ပတ်စေဖို့ပါ။ မနက်စာမစားခင် ကိုယ်တွင်းက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားရာလည်းရောက်ပါတယ်။
အစားမစားခင် နာရီဝက်အလိုလောက်မှာရေတစ်ခွက်သောက်ပါ။ ဒါမှ အစာခြေစနစ်ကျန်းမာမှာပါ။ တစ်ခွက်ထက်တော့ ပိုမသောက်မိဖို့သတိထားပါ။ အစားမစားနိုင်တာမျိုးဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့်ပါ။ အစားစားပြီးချိန်မှာလည်း ရေတစ်ခွက်ထက်ပိုမသောက်ပါနဲ့။ အစာခြေအက်ဆစ်အားပျော့သွားပြီး အစာမကြေတာမျိုးဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့်ပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့ အူနံရံတွေက အာဟာရတွေကို အပြည့်အဝစုပ်ယူနိုင်စေဖို့အတွက် ထမင်းစားပြီး တစ်နာရီကြာမှ ရေသောက်တာအကောင်းဆုံးပါ။
ရေမချိုးခင်ရေတစ်ခွက်သောက်ပေးရပါမယ်။ ဒါကတော့ သွေးပေါင်ချိန်ကိုထိန်းညှိဖို့အတွက်ပါ။ ရေမချိုးခင် ရေတစ်ခွက်သောက်ပေးတာက သွေးတိုးကျစေနိုင်ပါတယ်နော်။
ညအိပ်ရာမဝင်ခင်မှာ ရေတစ်ခွက်သောက်ပေးပါ။ ညအိပ်နေစဉ်ရေဓာတ်ဆုံရှုံးမှုကို ကာကွယ်ဖို့အတွက်ပါ။ ညမအိပ်ခင်ရေတစ်ခွက်သောက်တာက လေဖြတ်တာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သလို ရုတ်တရက်နှလုံးရပ်တာဖြစ်နိုင်ခြေကိုလည်း ကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်နော်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေ၊ အားကစားသမားတွေ၊ ကာယအားသုံးပြီး အလုပ်လုပ်နေရသူတွေ၊ချွေးထွက်များနေသူတွေ၊ နို့တိုက်မိခင်တွေကတော့ ရေကို အခြားသူတွေထက် ပိုသောက်ဖို့လိုအပ်ပါမယ်။ ဒါမှ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရေဓာတ်မျှတပြီး ကျန်းမာလန်းဆန်းနေမှာပါ။ နည်းစနစ်မှန်မှန်လေးရေသောက်လို့ ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးကိုစောင့်ရှောက်ရအောင်လား Hello ဆရာဝန်ပရိသတ်ကြီးရေ……………
ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီတဲ့ အလေ့အထတွေကို ဒီလိုပြင်ဆင်ကြမယ်
8 healthful times to drink water, your body will function properly https://www.medclique.org/lifestyle/drink-water-body-function-properly/ Accessed Date 14 March 2019
Signs You Are Drinking Water Wrong (And5Right Ways of Doing So!) https://www.practo.com/healthfeed/signs-you-are-drinking-water-wrong-and-5-right-ways-of-doing-so-20684/post Accessed Date 14 March 2019
Does drinking water beforeashower lower blood pressure? https://sujudh.wordpress.com/2015/09/13/does-drinking-water-before-a-shower-lower-blood-pressure/ Accessed Date 14 March 2019